1 Samueri 20:1-42
20 Zvino Dhavhidhi akatiza+ achibva kuNayoti iri muRama. Zvisinei, akasvika pamberi paJonatani akati: “Ndakaitei?+ Chii chandakanganisa, uye ndakatadzirei baba vako, nokuti vari kutsvaka mweya wangu?” 2 Iye akati kwaari: “Hazvimboiti!+ Hausi kuzofa. Tarira! Baba vangu havazoiti chinhu chikuru kana kuti chinhu chiduku vakasandiudza;+ uye nei baba vangu vangandivanzira nyaya iyi?+ Izvi hazviitiki.” 3 Asi Dhavhidhi akawedzera kupika+ akati: “Chokwadi baba vako vanofanira kunge vachiziva kuti unondifarira,+ naizvozvo vangati, ‘Musaita kuti Jonatani azive izvi kuti arege kurwadziwa.’ Asi, chokwadi, naJehovha mupenyu+ uye nomweya wako mupenyu,+ panongova nenhanho imwe chete pakati pangu norufu!”+ 4 Jonatani akati kuna Dhavhidhi: “Ndichakuitira zvose zvingataurwa nomweya wako.” 5 Dhavhidhi akati kuna Jonatani: “Tarira! Mangwana kugara kwomwedzi,+ uye ini, chero zvodini, ndinofanira kugara namambo kuti ndidye; ndirege ndiende, uye ndichavanda+ musango kusvikira manheru pazuva rechitatu. 6 Kana baba vako vakandishaya, uti, ‘Dhavhidhi akandikumbira nomwoyo wose nguva yokusava pabasa kuti amhanyire kuguta rake reBhetrehema,+ nokuti kune chibayiro chegore negore ikoko chemhuri yose.’+ 7 Kana vakati, ‘Zvakanaka!’ zvinoreva rugare kumushandi wako. Asi kana vakangotsamwa, ziva kuti ivo vasarudza kuita zvakaipa.+ 8 Itira mushandi wako mutsa worudo,+ nokuti wakapinda musungano+ yaJehovha nomushandi wako. Asi kana ndakakanganisa,+ chindiuraya iwe, nokuti ungandiendeserei kuna baba vako?” 9 Jonatani akati: “Handingambofungi zvakadaro pamusoro pako! Asi kana ndikangoziva kuti baba vangu vasarudza kukuitira zvakaipa, handizokuudzi here?”+ 10 Dhavhidhi akabva ati kuna Jonatani: “Ndiani achandiudza kana baba vako vakakupindura nehasha?” 11 Jonatani akatiwo kuna Dhavhidhi: “Uya tiende kusango.” Naizvozvo vakabuda, vakaenda kusango vari vaviri. 12 Jonatani akati kuna Dhavhidhi: “Jehovha Mwari waIsraeri+ ngaave chapupu+ kuti ndichaudza baba vangu panguva inenge ino mangwana, kana kuti pazuva rechitatu, uye kana vachifarira Dhavhidhi, handizokutumiri shoko ndikakuudza here? 13 Jehovha ngaaitire Jonatani saizvozvo uye ngaawedzere pazviri,+ kana baba vangu vakaona zvakanaka kuti vakuitire zvakaipa, ini ndikasakuzivisa, ndikasakurega uchienda, uye ukasaenda norugare. Jehovha ngaave newe,+ sezvaakava nababa vangu.+ 14 Kana ndichiri mupenyu,+ chokwadi hauzondiitiri mutsa worudo waJehovha here, kuti ndirege kufa?+ 15 Hauzobvisi mutsa wako worudo paimba yangu nokusingagumi.+ Uyewo, Jehovha paanoparadza vavengi vaDhavhidhi, mumwe nomumwe panyika, 16 zita raJonatani harizobviswi paimba yaDhavhidhi.+ Jehovha acharibvunza paruoko rwevavengi vaDhavhidhi.” 17 Naizvozvo Jonatani akapikirazve Dhavhidhi nokuti aimuda; nokuti aimuda sokuda kwaaiita mweya wake.+ 18 Jonatani akati kwaari: “Mangwana kugara kwomwedzi,+ chokwadi uchashayikwa, nokuti chigaro chako chichange chisina munhu. 19 Pazuva rechitatu uchanyanya kushayikwa; uuye kunzvimbo yawakavanda+ pazuva rokushanda, ugare pedyo nedombo iri riri pano. 20 Ini ndichapfura miseve mitatu kune rumwe rutivi rwaro, kuti ndiiendese kwandichaiendesa kune chinopfurwa. 21 Tarira! ndichatuma mushandi, ndichiti, ‘Enda unotsvaka miseve.’ Kana ndikataurira mushandi wacho zvakananga kuti, ‘Tarira! Miseve iri kurutivi rwako urwu, itore,’ naJehovha mupenyu,+ ibva wauya, nokuti zvinoreva rugare kwauri uye hapana nyaya. 22 Asi kana ndikati kumukomana wacho, ‘Tarira! Miseve iri mberi kwako,’ iwe enda, nokuti Jehovha akurega kuti uende. 23 Asi shoko ratataura,+ ini newe, chokwadi, Jehovha ngaave pakati pangu newe nokusingagumi.”+ 24 Zvino Dhavhidhi akavanda+ musango. Mwedzi wakati wagara, mambo akagara pachigaro chake pakudya kuti adye.+ 25 Mambo akanga akagara pachigaro chake sezvaaiita pane dzimwe nguva, pachigaro chaiva pedyo nemadziro; uye Jonatani akanga akatarirana naye, Abhineri+ akanga akagara pedyo naSauro, asi nzvimbo yaDhavhidhi yakanga isina munhu. 26 Asi Sauro haana kumbotaura chinhu chero chipi zvacho zuva iroro, nokuti akati: “Pane chaitika zvokuti haana kuchena,+ nokuti haasati acheneswa.” 27 Zuva rokugara kwomwedzi rapfuura, pazuva rechipiri, nzvimbo yaDhavhidhi yakaramba isina munhu. Sauro akati kuna Jonatani mwanakomana wake: “Nei mwanakomana waJese+ asina kuuya kuzodya zuro kana nhasi?” 28 Naizvozvo Jonatani akapindura Sauro akati: “Dhavhidhi akandikumbira nomwoyo wose nguva yokusava pabasa kuti aende kuBhetrehema.+ 29 Uye akati, ‘Ndapota, ndirege ndiende nokuti tine chibayiro chiri kupiwa nemhuri muguta, ndakarayirwa nomukoma wangu. Zvino, kana wandinzwira nyasha, ndapota, ndirege ndiende chinyararire, kuti ndinoona vakoma vangu.’ Ndokusaka asina kuuya patafura yamambo.” 30 Sauro akabva atsamwira+ Jonatani kwazvo, akati kwaari: “Iwe mwanakomana womushandikadzi anopandukira,+ unoti handinyatsozivi kuti uri kusarudza mwanakomana waJese kuti uzvinyadzise uye unyadzise nhengo dzakavanzika dzaamai vako here?+ 31 Nokuti mazuva ose ayo mwanakomana waJese anenge ari mupenyu panyika, iwe noumambo hwako hamuzosimbiswi kwazvo.+ Zvino tumira shoko unomutora auye kwandiri, nokuti anofanira kufa.”+ 32 Zvisinei, Jonatani akapindura baba vake Sauro, akati kwavari: “Anofanira kuurayirwei?+ Aitei?”+ 33 Sauro akabva akanda pfumo kwaari kuti amuuraye;+ Jonatani akabva aziva kuti baba vake vakanga vasarudza kuuraya Dhavhidhi.+ 34 Jonatani akabva asimuka patafura akatsamwa kwazvo,+ uye haana kudya zvokudya pazuva rechipiri pashure pokugara kwomwedzi, nokuti akanga arwadziwa pamusoro paDhavhidhi,+ nokuti baba vake vakanga vamunyadzisa.+ 35 Mangwanani Jonatani akaenda kusango renzvimbo yaDhavhidhi yakatarwa,+ uye akanga aine mumwe mushandi muduku. 36 Akati kumushandi wake: “Ndapota, mhanya, tsvaka miseve yandiri kupfura.”+ Mushandi wacho akamhanya, iye akapfura museve kuti umudarike. 37 Mushandi wacho paakasvika panzvimbo yaiva nomuseve wakanga wapfurwa naJonatani, Jonatani akatanga kushevedzera ari shure kwomushandi wacho achiti: “Museve wacho hausi mberi kwako here?”+ 38 Jonatani akashevedzera ari shure kwomushandi wacho achiti: “Chimbidza! Kurumidza! Usamira!” Mushandi waJonatani akanhonga miseve yacho akabva auya kuna tenzi wake. 39 Asi mushandi wacho haana chaakaziva; Jonatani naDhavhidhi chete ndivo vaiziva nezvenyaya yacho. 40 Pashure paizvozvo Jonatani akapa mushandi wake zvombo zvake akati kwaari: “Enda, zviendese kuguta.” 41 Mushandi wacho akaenda. Asi Dhavhidhi akasimuka nechepedyo kumaodzanyemba. Akabva awira pasi+ nechiso chake, akakotama katatu; uye vakatanga kutsvodana+ nokusvimhirana misodzi, kusvikira Dhavhidhi anyanyisa.+ 42 Jonatani akati kuna Dhavhidhi: “Enda norugare,+ zvatapika,+ tiri vaviri, muzita raJehovha, tichiti, ‘Jehovha ngaave pakati pangu newe nepakati pevana vangu nevana vako nokusingagumi.’”+ Naizvozvo Dhavhidhi akasimuka akaenda, Jonatani akapinda muguta.